၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာမင်းရဲ့ ဦး နှောက်က Porn ကိုခေါ်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn တွေ့ဆုံ။ ဒီမှာလုပ်တဲ့သိပ္ပံပညာက။
ဒီသုံးပါ စာတန်းများကိုလုပ်မှတ်တမ်း သင့်ရဲ့ဘာသာစကားမှာဗီဒီယိုသည်။
(မှတ်စု - ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများသည်ကိုးကားချက်များစွာပါ ၀ င်သည်)
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 28 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
အမြန်နှုန်းမြန်သောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းစေသောအရိပ်လက္ခဏာများ။ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 55 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? 75 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်. အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
Highspeed Internet Porn အသုံးပြုမှုကယုံကြည်ချက်တွေ၊ သဘောထားတွေနဲ့အပြုအမူတွေကိုထိခိုက်စေသလား။ တစ် ဦး ချင်းလေ့လာမှုများကိုစစ်ဆေးပါ - 35 ကျော်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များဆီသို့ "ကို un-သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည် - ဤ 2016 Meta-analysis သည်ကနေဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချုပ်: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015။ ကောက်နုတ်ချက်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်အမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းကောအသို့နည်း။ အခြား meta-analysis: အထွေထွေပြည်သူ့အင်အားလေ့လာရေးအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်တမန်တော်တစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း (2015)။ ကောက်နုတ်ချက်:
"? ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအဓမ္မပြုကျင့်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချမထားပါဘူး" ဘယ်သူမျှမက, မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားမကြာသေးမီနှစ်များတွင်မြင့်တက်ပြီ: "မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားများမြင့်တက်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်လိုလားသူ porn ဝါဒဖြန့်လျစ်လျူရှု။ "ကိုကြည့်ပါက ပို. သည် တစ်ခုကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုအဘို့ဤစာမကျြနှာ porn တစ်ခုတိုးလာရရှိမှုလျော့နည်းသွားမုဒိမ်းမှုနှုန်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်သောမကြာခဏ-ထပ်ခါတလဲလဲအခိုင်အမာ၏။
အင်တာနက်အမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း။ ဒီစာရင်းထွက်စစ်ဆေးပါ 280 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများကျော်, ဒါမှမဟုတ်စာပေဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13,ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15, ပြန်လည်သုံးသပ်မှု # 16။ သုတေသန၏ဤ 2012 ပြန်လည်သုံးသပ်၏နိဂုံးမှသည် - ဆယ်ကျော်သက်များအင်တာနက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - သုတေသန၏တစ် ဦး ကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း:
မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဤတင်ပြချက်အတွက်သီးသန့်လေ့လာမှုများ
urology ပါမောက္ခကဟောပြောပွဲများ၏ PDF ဖိုင်ရယူရန် Carlo Foresta (2014) - လေ့လာမှုများစွာ
ညစ်ညမ်းစွဲ - neuroplasticity (2013) ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့် supranormal လှုံ့ဆော်မှု.
UPDATE: 'shemales' ကိုမည်သူဆွဲဆောင်သနည်း။ - gynandromorphophilic အမျိုးသားများကဘယ်သူတွေလဲ။ လိင်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်မှုကိစ္စပါ ၀ င်သောအမျိုးသားများအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ (၂၀၁၅)
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)
/ r / NoFap စစ်တမ်းဒေတာ - ပြီးပြည့်စုံသော Datasets
ဒေါက်တာ Oz ကိုပြသပါ Porn-သွေးဆောင် ED စုံစမ်းစစ်ဆေး
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ဦး နှောက်အားနည်းချက်ဆောင်းပါးများ & လေ့လာမှုများ
Teဦးနှောက် en အန္တရာယ်များအပြုအမူ၏အမြစ်အကြံပြုခြင်း Over-ဖြစ်စဉ်ကိုဆုလာဘ်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယှက်
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာမီးအတွက် Dopamine အာရုံခံပိုမြန်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်လူကြီးများထက်။
အစောပိုင်းက Orbitofrontal Cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ Accumbens ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်အန္တရာယ်-ယူအပြုအမူအခြေခံနိုငျ
Frontostriatal ရင့်ကျက်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်တွေကို Appetitive မှသိမှုထိန်းချုပ်ရေးပျက်ကွက်ခန့်မှန်း
ဆယ်ကျော်သက် cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုး: စွဲဘို့အားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။
အမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် porn သည်ခြားနားသည်
အဆိုပါ Kappa opioid အဲဒီ receptor agonist U50488 (2011) ၏လိုလားသူစိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်း DeltaFosB ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်
(နှင့်) ဦးနှောက်အကြိုးကိုဆားကစ်အတွက် DeltaFosB စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates ။ (2010)
ΔFosB: တစ်ဦးကမော်လီကျူးဂိတ်နျူကလီးယပ် Accumbens အတွင်းလှုံ့ဆော်လုပ်ငန်းစဉ်လော (2006)
တစ်ဦးနူးညံ့သောအသက်အရွယ် (Winnipeg Free Press မှ) မှာညစ်ညမ်းအတွက်ညျ့
“ ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်အရှိန်မြှင့်ဆန့်ကျင်မှုနှင့်တွေ့ဆုံ”